ese iphone 12 mini madhiri nemitengo paverizon, t-mobile, pa & t, zvakanak kutenga, kana kukiyiwa
Kuru Nhau & Ongororo Yese iPhone 12 mini madhiri nemitengo kuVerizon, T-Mobile, AT & T, Best Buy, kana kukiyiwa
Zvirokwazvo Apple & apos; foni inotarisirwa kwazvo mumakore - iyo 5.4 'iPhone 12 mini - iri pakupedzisira pano, uye runyerekupe rwese rwanga rwune compact foni vanodakadza nekunakirwa chaiko. Hongu, it & apos; s kunyange diki pane iyo iPhone SE, uye, hongu, ine simba asi pa yakachipa pane iPhone 12 mutengo . Hei, kunyangwe kuratidzwa iri 1080p OLED pani, uye ine imwecheteyo kamera yakatarwa seiyo iPhone 12!
Iine iyo iPhone 12 mini, Apple inozadza yekupedzisira saizi saizi tarisiro iyo yaisina & apos; kuva nepo mune izvozvi zvakadaro, uye ikozvino inovhara iyo renji kubva pa4.7-6.7 inches, iyo iPhone yezvose ruoko uye muhomwe zvirokwazvo.
Iyo iPhone 12 mini inodhura zvakadii nekutengesa mukati uye ndingaitenga kupi?
Iyo iPhone 12 mini ($ 699 kukosha) inouya mahara kuAT & T, T-Mobile, Verizon, Target, nevamwe, ine tambo nyowani uye yakakodzera kutengeserana-mukati, senge iyo akanakisa iPhone 12 Pro madhiri . Idaidze iyo coronavirus-inosimudzira yekutsinhwa kwecheni kunonoka, kana huchenjeri hwekushambadzira nzira yekugutsa iyo yekutenga chinangwa chevatangi vekutanga neakawanda ekumhanyisa-e-iwo-mamodheru mamodheru, asi Apple zvirokwazvo ichatambanudza yayo iPhone 12 dzakateedzana mari zvakanaka muna 2021, yakapihwa kuti iyo iPhone 12 Pro mini kuburitsa zuva yaive Mbudzi 13.
Apple iPhone 12 mini $ 52999 $ 69999 Tenga paGoodBuy $ 69999 Tenga kuVerizon $ 0 $ 699 Tenga kuAT&T $ 0 $ 699 Tenga kuChivavarira
Let & apos; s dzokororazve ese iPhone 12 mini specs, mavara, maficha, uye vhezheni yemutengo ma tag:
Kuchengeta shanduro: 64G / 128G / 256G
Mitengo: $ 699 / $ 749 / $ 849 paVerizon uye AT & T, kana $ 729 / $ 779 / $ 879 paT-Mobile kana kukiyiwa
Mavara: bhuruu, girini, nhema, chena, uye (PRODUCT) RED.
Ratidza saizi uye resolution: 5.4 '1080 x 2340 pixels OLED 60Hz Super Retina XDR Ratidza neCeramic Shield Mberi Kavha.
Prosesa uye RAM: Apple A14 / 4GB RAM
Makamera: 12MP main + 12MP ultrawide kamera, f / 1.6 aperture, 7P lens
Itsva iPhone 12 kamera maficha: Yakadzika Fusion 2, Smart HDR 3, Night Mode Timelapse
5G kubatana ne Smart Data Mode
15W isina waya kuchaja
Kwete charger kana mahedhifoni muiyo iPhone 12 mini bhokisi
Uye ikozvino, pasina kumwe kunonoka, regai & apos; svetukire chaipo mune yakanakisa iPhone 12 mini madhiri uye zvinopihwa!
Tenga iPhone 12 mini kubva kuApple.com: simuka kusvika kumadhora mazana mashanu nemakumi mashanu neshanu yekutengeserana
Unogona kusimuka kusvika pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu nemashanu pamwe nekodhi yekutengesa-mukati neApple. Kuti ubatsirwe nehukuru hwekutengesa-mukutapudza, iwe unofanirwa kutengesa-muiyo iPhone 7 kana nyowani. Iwe unogona zvakare kushambadzira-mumafoni eApple, senge iyo Galaxy Note 10. Iyo nyowani foni iri, zvirinani kutengeserana-mune kupihwa. Ramba uchifunga kuti iyo yekutengesa-mufoni inofanirwa kunge iri mune yakanaka mamiriro ekushanda kuti ubatsirwe nekutengesa-mune mutepfenyuro. Kune iyo nyowani nyowani mureza, semuenzaniso foni kubva kune iyo iPhone 11 nhevedzano, iwe unogona kuwana kunyange yakakura dhisikaundi. Unogona kutenga chero isina kuvhurwa iPhone 12 mini, kana inotakura-yakavharwa imwe.
Kusvika pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu nemashanu nekutengesa mu: Yakavhurwa $ 729 isati yatengeswa, kana anotakura akavhara 699 $ pamberi pekutengesa
Kutengesa-mukati$ 699Tenga kuApple
AT & T ine yakanakisa iPhone 12 mini kutengeserana-mukutengeserana, pamutengo wemahara
Sezvo iwe ungangove wakambonzwa kare, iyo yakawanda yakatorwa iPhone 12 mhando $ 699 yekutanga mutengo ndeye $ 30 AT&T, T-Mobile (paApple chete), kana Verizon dhisikaundi, uye inoda kuisirwa nevatakuri. AT & T & apos s s, zvisinei, ndeye kubhadhara iyo iPhone 12 mini mutengo muzvikamu makumi matatu:
iPhone 12 mini 64GB ye $ 28.34 pamwedzi kana $ 699 pamberi pekutengeserana muAT&T
Parizvino, nyowani kana iripo AT & T subs inokwanisa kuwana yazvino gumi nemaviri mahara. Hezvino & maapos zvaunoda kuita kuti ukwanise kuwana yemahara iPhone 12 mini kupihwa:
Tenga smartphone inokodzera pachibvumirano chakakodzera chikamu, kusanganisira mutero pamutengo uzere wevatengesi (kumberi), uye $ 30 yekumisikidza kana kusimudzira muripo.
Wedzera mutsara mutsva webasa, kana kusimudzira tambo iripo.
Shingairira postpaid isina waya isina waya isina hurongwa hweinosvika madhora makumi manomwe nemashanu / mwedzi yevatengi vatsva zvisati zvaderedzwa
Kutengesa-mune foni iri mushe mushe mushe mushe pamwe nepashoma yekutengesa-mune kukosha kwe $ 95 ye $ 700 chikwereti ($ 35 ye $ 350 kiredhiti) mukati memazuva makumi matatu ekumisikidza.
Tora $ 700 mumabhiriti echikwereti nekutengesa-mune kukosha kweinenge $ 95 ($ 350 nekutengeserana-kukosha kwe $ 35 kusvika $ 94) inopararira kwemwedzi makumi matatu.
64GB, inosvika kumadhora mazana manomwe kubva mukutengesa-mukati
$ 700 yabviswa (100%) Kutengesa-mukati$ 0 $ 69999 Tenga kuAT&T
Pano & apos; iyo AT & T yakanaka kudhinda pane iyo iPhone 12 akateedzana dhiri: 'Mutengo wemwedzi wega wega unoratidza kubhadhara kwemwedzi pamwedzi, mushure mekushandisa kweTT & T bhizinesi-muchikwereti inosvika kumadhora mazana masere yakashandiswa pamwedzi makumi matatu mushure mekushambadzira-inokodzera smartphone ine hushoma $ 95 yekutengesa-muukoshi. Inoda kukwidziridzwa kwetambo uripo (kana kumisikidzwa kwetambo nyowani muzvitoro) uye kutengwa kweiyo nyowani iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, kana iPhone 12 Pro Max pane anokodzera 30-mwedzi 0 muzana APR hurongwa hwekuisa.. '
Sezvauri kuona, unogona kushambadzira nyore nyore mune yakazara clunker yefoni uye uwane inopenya nyowani iPhone 12 mini - iyo nyika & apos; s inonyanya kugadzikana uye ine simba kwazvo foni ye5G mukirasi yayo, inotapira!
Apple iPhone 12 mini mutengo, madhiri uye kuwanikwa paVerizon
Ipo yayo mmWave 5G samambure iri ultrafast, Verizon haisi & apos; haanyatso kukwikwidza mukufukidzwa kwenyika kuenzaniswa neT-Mobile. Panguva imwe chete neiyo iPhone 12 mini chiziviso, zvakadaro, yakazivisa kuwanikwa kwayo kwe5G Ultra Wideband sevhisi mumaguta makumi mashanu nemashanu, nhandare makumi mana nenhandare, nenhandare nomwe, ichizvidaidza kuti '5G Nyika yese sevhisi' kuti maererano nemaverengero ayo anowanikwa kune anopfuura Mamiriyoni mazana maviri evanhu mumaguta chiuru nemazana masere muUS.
Verizon & apos; s iPhone 12 mini mutengo uye madhiri:
iPhone 12 mini inotanga pamadhora 29.16 pamwedzi kwemwedzi makumi maviri nemana pakubhadharwa kweVerizon (0% APR, $ 699.99 yekutengesa).
Sevha $ 150 paApple Tarisa nekutenga kwe iPhone
Tora Verizon Stream TV yemahara nekutenga.
BOGO$ 69999 Tenga kuVerizon
Apple iPhone 12 mini mitengo uye madhiri paT-Mobile
T-Nhare ikozvino ine rupo seAt & T kana Verizon, uye ichakutengesera iyo iPhone 12 mini ne $ 30 dhisikaundi uchienzaniswa neyakazara $ 729 mutengo weiyo yakavhurwa modhi, asi chete kana iwe ukaiwana kubva kuApple. Zvikasadaro, iyo iPhone 12 mini mitengo uye madhiri paT-Mobile ndeaya anotevera:
iPhone 12 mini kubva $ 24.37 pamwedzi kwemwedzi makumi matatu, kana $ 729 pamberi pekutengesa-mukati
Simuka kusvika pamadhora mazana masere nemakumi matatu kubva mubhajeti rechikwereti nekutengeserana-kwevatengi vatsva. Chirongwa chakakodzera chinodiwa.
Vatengesi kana vebhizimusi vatengi vanga vaine T-Mobile, kusanganisira Sprint, kwemakore mashanu + vanogona kuwana madhora mazana maviri emadhora pane chero iPhone nyowani pavanotengesa kana kuendesa chero inoshanda iPhone pachirongwa chakakodzera. Izvi zvinogona kusanganisirwa nehafu chibvumirano chekuchengetedza inosvika kumadhora mazana manomwe nemakumi mashanu.
Tora iyo iPhone 12 mini paT-Mobile / Sprint paKutenga Kwakanyanya:
Sprint / T-Mobile, chengetedza $ 200 + 6 mwedzi yemahara Apple Music Kunyorera
$ 8 yabviswa (27%)$ 2208 / mo$ 3042 Tenga paGoodBuy
Parizvino, T-Mobile iri kupa yakakura kutengeserana-mune dhisikaundi yeiyo iPhone 12 mini, uye iwe unogona kuiwana yemahara neIPI IPI iPhone iri mune yakanaka mamiriro ekushanda. Nekudaro, ichi chikumbiro chinoda iwe tambo nyowani kuT-Mobile pane yakakodzera chirongwa:
tora iyo YEMAHARA, mutsara mutsva uye kutengesa-mukati kunodiwa
$ 730 yabviswa (100%) Kutengesa-mukati$ 0 $ 72999 Tenga paT-Mobile
iPhone 12 mini AT & T dhizaini paGone Buy (hapana kutengeserana kunodiwa)
Parizvino, Best Buy iri kupa chete inotakura-yakavharwa iPhone 12 minis. Nekudaro, ivo havasi vasina chero kuderedzwa. Pari zvino, pasina chero bhizimusi-rinodiwa, AT & T iri kupa iyo iPhone 12 mini ye $ 629 netambo nyowani kana account. Chinhu chinotonhorera nezve ichi kupihwa ndechekuti haidi kutengeserana-mukati senge zvimwe zvinopihwa ne12 iPhone.
pane vatakuri vatatu
Apple iPhone 12 mini dhizaini kuChivavarira
Iwe unogona ikozvino kusimuka kusvika kumadhora mazana manomwe kubva paiyo iPhone 12 mini nekutengesa-mukati uye kusimudzira kune yakakodzera Unlimited chirongwa.
inosvika kumadhora mazana manomwe nekutengesa-mukati uye yakakodzera Unlimited chirongwa
$ 700 yabviswa (100%)$ 0 $ 69999 Tenga kuChivavarira
Paunenge uchinge uine yako nyowani iPhone 12 mini, usadaro & usakanganwa kutarisa edu makesi uye skrini yekudzivirira masarudzo kune yako nyowani iPhone.
google pixel yakakosha
metro nefoni t-nhare
Maitiro ekumisikidza VPN pane iPhone
Yahoo Mail yeApple GO inotangwa pamwe neshanduro yemabhurawuza ewebhu
Cheese! Chechitatu-chizvarwa Apple iPod touch prototype ine kumashure kamera kamera pa Twitter
T-Mobile iri kupa mitsara miviri yemahara kune vatsva uye varipo vatengi panguva yayo Magenta Chishanu kutengesa
Apple Watch Series 6 yeropa oksijeni yekutarisa: inoshanda sei uye sei yekuishandisa?